မာလာရှမ်းကောကို အချိုပါရနိုင်မယ့် မန္တလေးက Spicy Pot ?ရန်ကုန်ကိုရောက်လာပြီနော် – FoodiesNavi
မာလာရှမ်းကောကို အချိုပါရနိုင်မယ့် မန္တလေးက Spicy Pot ?ရန်ကုန်ကိုရောက်လာပြီနော်
By yin sandi On September 27, 2018 0
မာလာရှမ်းကောဆိုရင်တော့ အထွေအထူးပြောနေစရာမလိုအောင် ရေပန်းအစားဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံး အစားအစာအဖြစ် အစားတစ်လိုင်းတိုင်းလက်ခံထားပြီးသားပါ။ မာလာရှမ်းကောအရမ်းဟော့လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မာလာရှမ်းကောဆိုင်တွေကို ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ပေါပေါများများဖွင့်လာကြပြီး ရှိရင်းစွဲစားသောက်ဆိုင်တွေမှာပါ မာလာရှမ်းကောကိုရောင်းချလာကြပါတယ်။ ဒီလိုမှိုလိုပေါက်နေတဲ့ မာလာရှမ်းကောဆိုင်အသစ်တွေထဲမှာ မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးမှာ နာမည်ကြီးလူကြိုက်များပြီးသားမာလာရှမ်းကောဆိုင်ဖြစ်တဲ့ Spicy Pot လည်းအပါအဝင်ပါ။ နာမည်ကြီးပြီးသားဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ခွဲဖြစ်သလို စဖွင့်ဖွင့်ချင်း(၄၀)ရာခိုင်နှုန်းတောင် ဈေးလျော့ပေးထားတော့ အချိန်တိုင်းနီးပါးလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေခဲ့တာရယ်။ ဒီတော့ Foodiesnavi ရဲ့မင်မင်လည်းမရိုးမရွနဲ့ မနေနိုင်အောင်စားချင်လာလို့ ? Spicy Pot ရဲ့မာလာရှမ်းကောအရသာသွားမြည်းခဲ့တဲ့အကြောင်း Review လေးရေးပေးဦးမယ်နော် ?
? မင်မင်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ (၄၀)ရာခိုင်နှုန်း Promotion ကာလပြီးသွားပြီး (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းဈေးလျော့ထားတဲ့အချိန်လေးမှာပါ ?နာမည်ကြီးတာလည်းမပြောနဲ့ ဆိုင်ထဲဝင်ဝင်ချင်းမာလာရှမ်းကော အနံ့လေးရရုံနဲ့တင်ကို သွားရည်ယိုချင်စရာကောင်းတယ်ရယ် ? ကြက်သား ၊ ဝက်သုံးထပ်သား ၊ ဝက်ဂုတ်သား ၊ ဆိတ်သား ၊ ပုဇွန် ၊ ပြည်ကြီးငါးတွေရှိတယ်။ ဝက်သားလုံး ၊ ကြက်သားလုံး ၊ချိစ်အသားလုံး ၊ အမဲလုံး ၊ ပုဇွန်လုံး ၊ ကြက်အူချောင်းတွေနဲ့ ကိုရီးယားထုံချိုင်းလေးတွေရှိတယ်။ ဖက်ထုပ်အရောင်စပ်တွေထဲကတော့ ငါးဖက်ထုပ်တစ်မျိုးတည်းပဲတွေ့တယ်ရယ်။ မာလာရှမ်းကောတစ်မျိုးတည်း သီးသန့်ရောင်းတာမို့ ဖက်ထုပ်လေးတွေ ? ဒီထက်တော့ပိုများသင့်တယ်လို့ထင်မိတယ်။
မှာတာလည်းလူတွေများနေတာတောင် တော်တော်လေးမြန်တယ်ရယ်။ အရသာမမြည်းစမ်းသေးခင် မာလာရှမ်းကောပွဲကြီးမြင်လိုက်ရရုံနဲ့ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရော ? ဆီချွမ်းစတိုင်ဟင်းလျာတွေရဲ့ အရောင်အဆင်းပြင်ဆင်မှုတွေကို ကွက်တိမြင်တွေ့နေရတယ်။ အရသာကိုမြည်းစမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်း လုံးဝကိုအမေးဇင်းပဲ ? တစ်လုပ်စာလောက်မြည်းကြည့်လိုက်ရုံနဲ့တင် အရသာရဲ့လေးနက်မှုတွေကို ထိထိမိမခံစားရတယ်။ လှိမ့်ပြီးပတ်မွှေလိုက်တာ အဆီအိအိကြီးတွေဝေ့နေတာမျိုးလုံးဝမတွေ့ရဘဲ ပါဝင်တဲ့အမယ်တွေအားလုံးမှာ စိုစိုဖတ်ဖတ်လေးဖြစ်နေတာ ? အရသာကလည်း မချဉ်လွန်းမချိုလွန်းပဲ ချိုချဉ်ငံစပ်မျှမျှတတလေးနဲ့ တော်တော်ကြီးကိုစားလို့ကောင်းတာကွယ် ? လျှာလည်မှာအိခနဲစိမ့်စိမ့်ဝင်နေတဲ့ အရသာဓာတ်တွေကိုခံစားရတာနဲ့တင် တော်တော်ကြီးကျေနပ်ဖို့ကောင်းတာရယ် ? ရေးနေရင်းကိုသွားရည်ကျမိတယ် ? မာလာရှမ်းကောဆိုင်တွေတစ်ပုံကြီးစားဖူးတဲ့အထဲမှာတော့ Spicy Pot ကိုအခိုက်ဆုံးပါပဲ ?
ဒီဆိုင်လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ မာလာရှမ်းကောလည်းစားချင်တယ် အစပ်လည်းကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက် မာလာရှမ်းကောကိုအချိုပါရနိုင်မှာပါ ? ဒီတော့အစပ်နဲ့မတည့်တဲ့အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော် ? နောက်ထပ်ထူးခြားတာကတော့ ဟင်းရည်ပေးတာပဲ ? ရေညှိဖတ်အိအိထုတ်ထုတ်လေးတွေနဲ့ ဟင်းရည်လေးက ချွဲချွဲလေးဖြစ်နေပေမယ့် တော်တော်လေးသောက်လို့ကောင်းတယ်။ အစပ် Level အမြင့်ကြီးမှာလို့ အစပ်ပြေသောက်မယ်ဆိုရင် တော်တော်လေးပနံသင့်တယ် ? Drink အနေနဲ့ကတော့ Ready-made တွေပဲရနိုင်တဲ့အထဲကမှ Wang Loi Ji ဆိုတဲ့တရုတ်ရိုးရာဖျော်ရည်လေးသောက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ Green Tea အအေးမျိုးလေး သူကအချိုတော့ကဲတယ်။ သေချာကတော့ အအီသိပ်မပြေဘူးရယ် ။
ဟင်းအနှစ်ဖိုးကတော့ (၁၅၀၀)ကျပ်ပါပဲ အသီးအရွက်နဲ့အသားတွေလည်း ပုံမှန်ဈေးပဲမို့ (၂)သောင်းလောက်ဆိုရင်တော့ ထမင်းမပါဘဲနှစ်ယောက်အဝဆွဲလို့ရနိုင်တယ်။ အသားလုံးအသင့်အတင့်ပဲဆိုရင်တော့ (၁)သောင်းလောက်နဲ့ကိုကောင်းကောင်းရတယ် ? ဒီထက်ပိုသက်သာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်တိုဘာလ(၂၄)ရက်မတိုင်ခင်အထိ သွားစားမယ်ဆိုရင် (၂၀)ရာခိုင်နှုန်း Discount ရှိသေးတယ်နော် ?
မင်မင်ကတော့ ရှယ်ခံတွင်းတွေ့လွန်းလို့ မာလာရှမ်းကောဆိုတာနဲ့ Spicy Pot ကိုပဲတမ်းတနေမိမှာအသေအချာပါပဲ ? ဒီဆိုင်လေးမှာသွားစားမယ်ဆိုရင်တော့ မဟာဗန္ဓုလတံတားအဆင်း ၊ ပုဇွန်တောင် Ocean အပေါ်ဆုံးထပ် စက်လှေကားထိပ်တည့်တည့်မှာတင် လိုက်လံရှာဖွေနေစရာမလိုဘဲတွေ့နိုင်မှာပါနော် ? မင်မင်နဲ့အကြိုက်တူမတူ ငြင်းခုန်ရင်း Foodiesnavi Facebook Page ကိုလည်း Like & See First လုပ်ထားဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့နော် ?
In Restaurant Guides Tagged mala xiang guo Leaveacomment
ငါးရဲ့လတ်ဆတ်မှုတွေနဲ့ ထိမိတဲ့အရသာဓာတ်တွေကြောင့် နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဘဝမြင့်ကငါးကင်
ကိုက်ဝါးလိုက်တိုင်း အသားဖတ်တွေပေါက်ထွက်ကျလာမယ့် ငါးဖယ်လုံးဟင်းချိုရနိုင်မယ့် ဆိုင်လေး